Nhau - Teyeleec TC316A-RGB Nyowani Dhizaina-inokwenenzvera RGB LED Mwenje Buritswa!
Teyeleec TC316A-RGB Nyowani Dhizaina Fold-inokwanisa RGB LED Mwenje Buritswa!
Nhetembo ine mukurumbira yakati "Husiku hwakasviba hwakandipa maziso maviri matema, asi ndinoshandisa iwo kuwana mwenje". Zviripachena, mwenje unogara wakakosha muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Kune mwenje dzakasiyana pasi pekushandisa kwakasiyana. Zvimwe zvinoshandiswa kushongedza imba, zvimwe zvinoshandiswa mumugwagwa, zvimwe zvinoshandiswa zviitiko zvekunze zvakaita sekukamba, kukwira makomo. Apo husiku hunodoka, zuva rinodoka, uye zuva rinodoka. Tinogona kutora Teyeleec TC316A-RGB inoshandiswa kuVlogger, vatevedzeri uye vateveri vemifananidzo. Iwo maviri maLight Video Mwenje akabatana ne hinge, ese ari maviri anogona kupetwa uye kutenderera kune akawanda-mafambiro. Saka isu tinogona kungo tamba nayo seye yekuzorora chishandiso.
Sezvo isu tese tichizivikanwa, mumusika uripo, mwenje wechiedza we LED urikuwedzera kuwedzera, nekuda kweiyo COVID-19 mamiriro, akasiyana Led Video Mwenje inoshandiswa yeLaptop Vhidhiyo Conferencing, Zoom Kufona, Kuzvitepfenyura Kwako, Kurarama Kurarama uye online kudzidzisa! Tichiri kutora chikamu chezviitiko izvi, semunhuwo zvake, tinoda kuti zvitaridzike zvakanaka izvo zvinoda kuti mwenje wechiedza we LED uve wakakwirira. Zve TC316A-RGB, inogona kusvika2960Lux@0.5m , Hue chinogadziriswa kubva pa0 degree -360 degree; Ruvara Kugara rinogadziriswa kubva pa0-100, CRI-97, TLCI-96 Kupenya kubva ku0% -100% kudzikisira; Ruvara tembiricha kubva 2600K (inodziya) kusvika 12000K (inotonhora). OLED inoratidzira inopa kuverenga kwakaringana uye nyore kushanda nemabhatani / mapfundo.
Tiri kutsvaga kugona! Ichi chizvarwa chitsva chese-aluminium muviri akapeta-anokwanisa RGB kutora mifananidzo mwenje neakajeka uye compact dhizaini uye nyore kushanda. Iine mavara e360 uye zana-danho rekuzadza kugadziridzwa uye maviri-eruvara tembiricha mwenje marozari, iyo yakapetwa-inokwanisa RGB kutora mifananidzo mwenje inopa akasiyana mavara uye zviitiko.
Mazuva ano COVID-19 mamiriro achiri makukutu, makambani mazhinji haakwanise kushanda muhofisi, saka, basa repamba rinova sarudzo. Iine TC316A-RGB LED vhidhiyo mwenje iri padhuze, isu tese tinotarisira kuti iwe unogona kuiwana ichishamisa uye inoshamisa, uye iwe uchagara uine tariro nezveramangwana uye hapana mubvunzo kuti munhu wese anoda kuve naTyeleec TC316A-RGB iripedyo ! Hazvina mhosva kuti nyika ino ichave yakadii, isu tichine chiedza pamoyo!
Post nguva: Nov-18-2020 KUDZOKA